कसरी तपाइँको डोमेनमा गुणवत्ता ब्याकलिङ्कहरू थप्नु हुन्छ?
आउनुहोस् हामी खोज इन्जिन अनुकूलन को तल रेखा संग शुरू गर्छौं. यदि तपाइँ आफ्नो वेबसाइट एसईओ बारे सोच्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई तपाइँको साइटमा ब्याकलिङ्कहरू थप गर्ने बारे पनि हेरचाह गर्नुपर्छ. तपाईंको साइटमा उपयुक्त कुञ्जी शब्दहरू चयन गर्न पर्याप्त छैन, बहुमूल्य सामग्री सिर्जना गर्नुहोस् र एकदम सही डिजाइन लागू गर्नुहोस्. तपाइँले वेबसाइटमा लाखौं अन्य स्थानहरूमा सम्बन्धित डोमेनहरूमा खोज नतिजाहरू देखाउन प्रयास गर्न आवश्यक छ. प्रयोगकर्ताहरू बीचको ब्रान्ड जागरूकता सुधार गर्न उत्तम सम्भव तरीका यसको वरिपरी एक विजेता लिङ्क निर्माण अभियान हो. यस लेखमा, हामी वेबसाइटमा ब्याकलिङ्कको मूल्य र केहि अनिवार्य कसरी SEO को लागि बाह्य बाह्य लिंक निर्माण गर्ने बारे छलफल गर्नेछौं.
तपाईंको एसईओ कसरी योगदान गर्न सक्छ?
ब्याकलिङ्कहरूमा तपाईको साइट रेटिङमा महत्त्वपूर्ण असर छ किनकि गुगलले तपाईंको साइट प्राधिकरण को माध्यम ले यसको मूल्यांकन गर्दछ. यो खोज ईन्जिनियरिङ्का लागि आवश्यक छ कि अन्य व्यक्तिले तपाईंको ब्रान्ड बारे के सोच्न आवश्यक छ. यो जानकारीले तिनीहरूलाई उनीहरूको व्यवसायको सही मूल्याङ्कन गर्न र यसलाई मूल्याङ्कन दिन मद्दत गर्दछ.
हालैमा, वेबमास्टर्सले एसआरपीमा अनलाइन ब्यापार दृश्यतालाई सुधार गर्न सक्छ किनकि वेबमास्टर्सहरू आफ्नो वेबसाइटमा थप ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न संघर्ष गरे।. यद्यपि, यो उचित छैन, र Google ले यसको रैंकिंग एल्गोरिथ्म परिवर्तन गर्न निर्णय गर्यो. त्यसोभए, आजकल, केवल ती वेबसाइटहरू जुन गुणस्तर लिङ्क छन् जुन उनीहरूको साथमा छन्, Google खोज नतिजाहरूमा उच्च स्थान निर्धारण गर्ने मौका छ. उच्च गुणवत्ता, सान्दर्भिक वेबसाइटहरू तपाईंको साइटमा इशारा गर्दै, Google को रैंकिंग सीढी माथि बढ्ने संभावनाहरु. एक नियमको रूपमा, पुराना डोमेनहरूले समयसँग धेरै ब्याकलिङ्कहरू पाउँछन् भने यदि तिनीहरूका लागि केही गुणस्तर छन्. यद्यपि, यदि तपाइँ आफ्नो साइटमा गुणस्तर ब्याकलिङ्क थप्ने प्रक्रिया छिटो गर्न चाहनुहुन्छ भने, कनेक्शनहरू र ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्न सञ्जाल सुरु गर्नुहोस्।.
ब्याकलिंकको गुणस्तर निर्धारण कसरी गर्ने?
दुर्भाग्यवश, सबै ब्याकलिङ्कहरू समान बनाइएनन्. तिनिहरु मध्ये केहि पनि आफ्नो रैंकिंग को नष्ट गर्न सक्छन् र खोज इन्जिन दंड को कारण हुन सक्छ कि अरुहरु तपाईंलाई कुनै पनि मूल्य प्रदान गर्दैन. यही कारणले स्प्याम लिङ्कहरू र सान्दर्भिक गुणस्तर लिङ्क बीचको भिन्नता थाहा पाउन महत्त्वपूर्ण छ.
बाह्य लिंकहरूको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न विचार गर्न आवश्यक केही मापदण्डहरू छन्:
(1 9) विश्वसनीयता
Google धेरै वेबसाइटहरूको प्रशंसा गर्छ जुन केही भरोसा छ. यस्ता साइटहरूबाट ब्याकलिङ्कहरू अन्य तेस्रो-पक्ष वेबसाइटहरू भन्दा बढी मूल्यवान हुनेछन्. उदाहरणका लागि, फोर्ब्स, हफिंगटन पोस्ट, बीबीसी र अरू जस्ता वेब वेब स्रोतहरू तपाईले लक्षित यातायात, ग्राहकहरु र राजस्वको रूपमा धेरै मूल्य ल्याउनुहुनेछ।. यी वेबसाइटहरूबाट ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्दा केही हदसम्म जटिल कार्य हुन सक्छ, यसले तपाईको स्तर र यातायात डेटामा महत्त्वपूर्ण मान थप गर्नेछ.
(1 9) प्रासंगिकता
तपाईंलाई एक वेब स्रोत को प्रासंगिकता मा ध्यान दिन को लागी एक अन्य महत्वपूर्ण कारक तपाईले एउटा लिंक बनाउनुहुन्छ. Google ले एउटा स्रोतको विषय जाँच गर्दछ जुन तपाइँसँग लिङ्क हुन्छ. यदि यो तपाईंको व्यापार उद्योगसँग सम्बद्ध छैन भने, Google ले यसलाई समान रूपमा प्राप्त नगरेको रूपमा आकर्षित गर्दछ. यसबाहेक, प्रासंगिक वेब स्रोतहरूमा लिङ्क राख्नु तपाईंलाई थप मान ल्याउनेछ किनभने तपाईका सम्भावित ग्राहकहरू आकर्षित गर्न सक्नुहुनेछ.
(1 9) PageRank
PageRank Google द्वारा प्रयोग गरिएको एल्गोरिदम छ जुन तपाइँको वेबसाइटलाई खोजी इञ्जिन परिणाम पृष्ठमा स्थान दिईन्छ।. तपाईं Semalt वेबसाइट विश्लेषक वा अन्य पेशेवर उपकरणहरू प्रयोग गरेर वेबसाईट पेजरङ्क जाँच गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले सही वेबसाइट मेट्रिक्स प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ. तथ्यलाई ध्यान दिनुहोस् कि सबै साइटहरू शून्यसँग सुरु हुन्छ. यही कारणले फरक फरक संकेतहरू लिन्छ Source .